Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ | China anụ ahụ ngwugwu igwe Manufacturers na Suppliers
TB-140 Automatic Akwụkwọ mposi anụ ahụ mbukota Machine
Nkọwapụta teknụzụ TB-140 Akwụkwọ akwụkwọ 0.03-0.04mm Oke mbukota nkọwapụta L (90-120) mm, Ф100-130mm inggba ọsọ ọsọ 60-100 mpịakọta / nkeji Isi Isi Ike ike 1.5KW Ike niile 5.71KW Ike ọkọnọ ụdị 3phase 4wire 380V 50Hz Machine mkpọtụ ≤80dB Ikuku ikuku 0.5-0.8 Mpa Ikuku ikuku 120-160L / min Nha Igwe 2966 * 2444 * 1723mm Igwe dị arọ 3000KG Ọkwa dị elu nke ụkpụrụ nchekwa. Igwe na-arụ ọrụ igwe nwere ike iru 100 Rolls kwa nkeji. ...
TB-120 Automatic Ihu anụ ahụ Box mbukota Machine
Nkọwapụta teknụzụ TB-120 Akwụkwọ akwụkwọ nke katọn 300-400g / m3 Mbukota Speed ​​30-100 igbe / min Nkọwa nkenke kachasị L240mm * W120mm * H90mm Ihe gbazee igwe na-ekpo ọkụ 2.32kw Onyinye ọkụ 380V50HZ Igwe mkpọtụ ≤80dB Ikuku ikuku 0.5-0.8Mpa Ike oriri 6.2KW Igwe nha L3250mm * W1600mm * H1800mm Ibu igwe 2100kg Ọkwa dị elu nke ụkpụrụ nchekwa. Igwe na-arụ ọrụ igwe nwere ike iru igbe 100 kwa nkeji. Nkà mmụta sayensị na imewe ...
TB-180 High Speed ​​Ihu anụ ahụ Carton mbukota Machine
1.Machine Outlook 2.Main Atụmatụ na Uru 2.1 TB-180 na-eji sistemụ ngagharị ngagharị. 2.2 Max ikike nke ruru 150 igbe kwa nkeji. 2.3 Ọkọlọtọ nche arụmọrụ. 2.4 Ọdịdị na nke ezi uche dị na ya, arụmọrụ dị mfe na nhazi. 2.5 N'ịnabata photoelectric anya akpaka nchọpụta nsuso usoro. 2.6 Kwụsị na akpaghị aka ma ọ bụrụ na enweghị katọn ma ọ bụ pụọ na mpempe akwụkwọ gaa n'ihu. 2.7 Dị mfe ịgbanwe nha dị iche iche. 2.8 Ikpuchido na akpaghị aka maka bufee. 2.9 Iji Ame a ma ama ...
TB-100 Ihu anụ ahụ Carton mbukota Machine
1. Machine Outlook 2.Main Atụmatụ na Uru 2.1 Servo moto, ihuenyo mmetụ, PLC akara usoro na HMI nakweere iji hụ na mma nke ọrụ. 2.2 Max kwụsiri ike nke ruru 90 igbe kwa nkeji. 2.3 Kọmpat na ezi uche Ọdịdị, mfe ime ihe na ukpụhọde. 2.4 N'ịnabata photoelectric anya akpaka nchọpụta nsuso usoro. 2.5 Kwụsị na akpaghị aka ma ọ bụrụ na enweghị katọn ma ọ bụ pụọ na mpempe akwụkwọ na-aga n'ihu. 2.6 Ọ dị mfe ịgbanwe nha dị iche iche. 2.7 Chedo onwe gi ozugbo